विकासमा अवरोध गर्ने प्रतिगामी, जनताको जीबनस्तर सुधार गर्न आर्थिक विकास अपरिहार्य ; अर्थमन्त्री « Bizkhabar Online
विकासमा अवरोध गर्ने प्रतिगामी, जनताको जीबनस्तर सुधार गर्न आर्थिक विकास अपरिहार्य ; अर्थमन्त्री
16 December, 2014 6:23 am
१ पुस, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक विकासमा अवरोध गर्नेलाई प्रतिगामीको संज्ञा दिएका छन् । जनताको जीबनस्तर सुधार गर्न आर्थिक विकास अपरिहार्य भएको भन्दै उनले यस्तो कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्नेहरु साचो अर्थमा प्रतिगामी भएको धारणा राखेका हुन् ।
चितवन उद्योग वाणिज्य संघको ४८ औं बार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै डा.महतले यस्तो धारणा राखेका हुन् । “जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन सकिएन भने कुनै पनि व्यवस्था टिक्न सक्दैन” डा. महतले भने “अव आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ ।
आर्थिक विकास विना जनताको जीवनस्तर माथि जान नसक्ने भन्दै यसका लागि सरकार साहसिक निर्णय गर्दै अगाडि बढिरहेको बताए । आर्थिक उन्नतिका लागि बजारका संयन्त्रहरुलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उनको धारणा थियो । भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा राजनीतिक दलहरुको अवरोधप्रति पनि अर्थमन्त्री डा.महत आक्रोसित रुपमा प्रस्तुत भए ।
विकासप्रतिको यस्तो कामले नेपालीलाई पछि धकेल्ने काम मात्र गर्छ’ उनले भने “ स्थानीय जनताका मागहरु पूरा गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । तर यस्तो विरोधले लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित भै आर्थिक विकास नै अवरुद्ध हुने बताए । सो आयोजनामा उनकै दल नेपाली काँग्रेस, एमाले र राप्रपा तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीका स्थानीय कार्यकर्ताले अवरोध सिर्जना गरेको बताइएको छ ।
कार्यक्रममा चितवन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कल्याण जोशीले चितवनको विकासका लागि कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा तथा सिर्जनात्मक पुँजी निर्माणका २२ वटा बूँदाहरु प्रस्तुत गरे । रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ज्ञानवहादुर विसुरालले निजी क्षेत्रलाई बढावा दिने सरकार र अर्थमन्त्री भएकोले अर्थतन्त्रले गति लिने धारणा राखेका थिए ।
महासंघको विशिष्ट सदस्यमा पशुपति मुरारका र मानार्थ सदस्यमा किशोर प्रधान नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विशिष्ट सदस्यमा महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका नियुक्त भएका छन्
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन स्विकार्य छैन : मन्त्रिपरिषद
काठमाडौं । नेपाल सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’ प्रतिवेदन
महासंघको नयाँ कार्यसमितिले गर्याे पदभार ग्रहण, १९ औं अध्यक्षमा शेखर गोल्छा
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघको नवनिर्वाचित नयाँ कार्यसमितिले पदभार ग्रहण गरेको छ । आईतबार
आईतबार नेपालमा १२५५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, २५ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । आईतबार नेपालमा थप १ हजार २ सय ५५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि